Mogadishu Journal » Dowladda Soomaaliya oo baaritaan ku sameyneysa xoolihii laga soo celiyay Saudi Arabia
Dowladda Soomaaliya oo baaritaan ku sameyneysa xoolihii laga soo celiyay Saudi Arabia
Mjournal :-Xukuumada Soomaaliya ayaa sheegtay in ay baaritaanno ku billowday Xoolihii dhawaan laga soo celiyay Dalka Sacuudiga, kaddib Markii Dalka Sacuudigu ay sheegtay inay si KMG ah hakad u gelisay Xoolaha uga yimaada Soomaaliya.
Wasiirka Xannaanada Xoolaha Somalia, Saciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in baaritaanno ay ku ogaanayaan Cudurrada laga helay Xoolaha laga dhoofiyo Somalia ay ku bilaabeen Xoolahii laga soo celiyay Sacuudiga.
Sidoo kale, Wsiirka ayaa sheegay in Arrintaas ay guddi u xilsaareen si loo baaro xoolaha, isagoo hadalkiisa ku daray in Natiijada Baaritaannadan kasoo baxa ay la Wadaagi doonaan Warbaahinta.
Ugu dambeyn, Dowladda Sacuudiga ayaa hakiyay xoolaha kaga imaan jiray Soomaaliya, iyadoo sheegtay in sababo caafimaad ah oo aysan weli Shaacin ay u Hakiyeen dhoofsiga xoolaha Soomaaliya ka yimaada.
Puntland oo maanta lagu soo gabagabeynayo xildhibaannada aqalka hoose